Ogaden News Agency (ONA) – Wax ka ogow sababaha ay ku yimaadeen guulaha siyaasiga ah ee ururka ONLF
Wax ka ogow sababaha ay ku yimaadeen guulaha siyaasiga ah ee ururka ONLF
Goortii ilaahay Cazza Wajalla uu dunidan askumay wax badan ayuu diyaariyay si ay ugu suurto gasho noolaha inay ku dul noolaadaan guudkeeda. waxyaabaha Rabi diyaariyay waxaa kamid ah Cirka oo uu ka yimaado sababka arsaaqda oo ah Roobka, laaantiina ayna noloshu suuto gasheen, waana waajib ilaahy isa saaray. Waxaa kale oo Alle abuuray dhulka wuuna fidiyay isagoo mar walba dhulku diyaar u yahay inuu soo saaro biyo iyo baad waxay bani,aadamku ka dalbadaan, kadibna dhirta ayuu ku dul sharraxay si dadku ay u helaan waxay u kaalmaystaan qaab nololeedkooda.Intaasi waa inta ilaahay diyaariyay waxaase jirta in nolosha qeybaheeda kale bani aadamka laga doonayo inuu qabsado, waxaana kamid ah inayna marna dhacayn inuu Raashinku Dabka isa saaro oo hadana iska soo qaado oo hadana Saxanka isku rido, kadibna Fandhaalku isa soo daro afkana wax kuu galiyo,qaabkaas ilaahay wuu ka mamnuucay daartan aan joogno.
Waxaan filayaa inaynu arrinkaas isla fahanay akhristow waxaanse u gurguuranayaa dhanka hadafka qoraalkan oo ah mid aan Diiradda ku saarayo guulaha siyaasiga ah ee Urur waynaha ONLF oo baryahan dambe daruuraha isku shareeray, taasoo uu qirayo cadowga laftiisu.
Ururka Gaamuray ee ONLF waxaa aas aasay 6 Dhalinyaro ah 1984 bishii August waxayna ahayd qaab qarsoodi ah, waxaana laga qariyay Soomaalia iyo Itoobiya labadaba taasina sababteeda ayay laheyd oo muhiim iima aha inaan kusii dheeraado.
Siday diintu sheegtay ilaahay ma eego jidhka ruuxa mana eego midabkiisa oo midkoodna misaan kuma leh ilaahay agtiisa, laakiin waxuu eegaa Qalbiga ruuxa. haday daacadnimo biyo dhigtay qalbigiisa goaanka uu qaatayna yahay mid dhab ah isla markaana aan cidna lagu dulmayn ilaahay wuu jecelay wuuna taageeri Qalbigaas. Dhalinta waqtigaas shiday dabka ONLF ayaan aaminsanahay inay daacad iyo ilaahay dartii ka ahayd halganka ay isu taageen waqtigaas uguna wanqaleen magaca ONLF. Hadey sidaas aheyn halgankooda oo quwado aan raali ka ahayn ku hareeraysnaa marna heerkan uu maanta joogo masoo gaadheen. Taasi waa sababka kowaad ee keenay in siyaasadda ONLF Daruuraha isku shareerto.
Markii laga yimaado aas aasayaashii waxaa saaxada halganka soo galay aqoonyano farabadan waxaana shaqsi kasta oo halganka lugta lasoo galay lagu qulaamiyay daacadnimo. Haday jireen dad aqoon sare lagu tuhmayo oo wata shahaadooyin iyo digriiyo, balse fahmi waayay xaqnimada halganka waxaa ku adkaatay inay si fudud kusoo dhex galaan meydaanka siyaasada ee laga hago ONLF. Taasina waa sababka labaad ee keenay in siyaasadda ONLF Daruuraha isku shareerto.
Wax waliba Minjo iyo Madax ayuu kala leeyahay. Haduu maduxu hagaag iyo toos u socdo minjuhuna iyagoo toosan ayay daba kacayaan. Madaxda sare ee halganka ayaa lagu tilmaami karaa inay yihiin walaalo dhab ah mararka qaarna waxaad moodeysaa inay iska sii xigaan kuwa wadaaga Hooyada iyo Aabaha. Waxaa cad inay isla gaadheen goaan ah aynu sharaf ku wada dhimano ama aynu sharaf kuwada noolaano. Waxaa sidoo kale ii muuqda in midkood waliba doonayo inuu ka dhabeeyo balankii uu qaaday isagoo Rabigii ka cabsanaya. Taasina waa sababka sadexaad ee keenay in siyaasadda ONLF Daruuraha isku shareerto.
Quraanka ilaahy waxuu wax badan inoogu sheegay ina isaga la talo saarto cidii talo saaratana inuu ku filanyahay, arinkaas ayaa ah mid aad ka dheehanayso hadalada iyo wax qabadka madaxda sare ee ONLF, Waxaana la odhan karaa waa Xadhig adag oy kaga gudbaan duruufaha qalafsan ee kahor yimaadda. Taasina waa sababka afraad ee keenay in siyaasadda ONLF Daruuraha isku shareerto.
Waxaa maal mahan si wayn saxaafada uga dhex muuqday ONLF oo si lama filaan ah uga mid noqotay madaxda sare ee ururk UNPO oo u taagan is garab taagga dadyowga loo xoog sheegtay ama lagu xaqiray dalalkoodii ee xornimo raadiska ah. Waqtiga ay kamid noqdeen oo dhawaa iyo waxaan islahayn iyagoo kamid noqday hogaaminta sare ee Ururka UNPO taasoon ku micneeyay inay la yimaadeen dadaal dheeraad ah. Si kastaba ha ahaatee kamid noqoshada ONLF hogaanka sare ee ururka UNPO ayaa lagu fasiri karaa iyagoo Mindi loo dhiibay Hilibna lasoo hor dhigay oo layidhi inataad rabtaan ka goosta! waxaan uga jeedaa qadiyadda OGADEN ayaa u muuqata mid durba xal waara laga gaadhi doono.
Kahor intaana soo afjarin maqaalkan waxaan bulshada geesiga ah ee ree Ogadenya ku gubaabinayaa inay sii xoojiyaan garab istaagga Xaq u dirirka ONLF mar hadii la waayay dariiq ka sahlan midkaas oo loo maro xornimada Dalka iyo Dadkiisaba.
Isku soo jumleeyoo Hogaaminta sare ee ONLF ayaa looga fadhiyaa guulo waa wayn oo is daba socda maadaama oon wali lagaadhin hadafkii hubka loo qaaday oo ahaa aayo katashiga umadda ree Ogadenya.